Ny tena malaza amin'ny Apple Music amin'ity taona 2017 ity dia any: Ed Sheeran, Luis Fonsi ary Joaquín Sabina | Avy amin'ny mac aho
Toy ny isan-taona dia asehon'i Apple amintsika ny fahombiazana lehibe indrindra amin'ny fampiharana azy, iBooks, Podcasts, mozika sy ny hafa, ary amin'ity taona 2017 ity amin'ny Apple Music dia efa manana ny hira hitsarany efa voafaritra tsara izy ireo. Tsara hatrany ny manazava ny momba ny mpanakanto malaza indrindra sy ny hira eto amin'ny firenentsika ary amin'ity tranga ity dia mazava raha mijery ny fampidinana sy ny famoahana azy isika.
Araka ny hitantsika amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, Ed Sheeran, Luis Fonsi ary Joaquín Sabina, no mibaribary mazava ao Espana hoy ny Apple Music. Etsy ankilany, manonona nyVoatendry handray ny loka GRAMMY ianao, izay efa mpanakanto tao amin'ny Apple Music Up Next 2017 Khalid, Daniel Caesar ary 6LACK.
Tamin'ity indray mitoraka ity ny Ny Album of the Year dia "Divide" nataon'i Ed Sheeran, ary ny hira nahomby indrindra dia ny "Despacito" nataon'i Luis Fonsi (miaraka amin'i Dada Yankee). Amin'ny toerana faharoa ao amin'ny tabilaon'ny rakipeon'ity taona 2017 ity dia ahitantsika ilay rakikira "I Deny Everything" nataon'i Joaquín Sabina.
Ny marina dia mandeha tsara ny serivisy mozika streaming an'i Apple ary tsy afaka milaza isika fa milamina ny fifaninanana fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Matetika Apple dia manao zavatra tsara rehefa miresaka mozika ary rehefa ampianao ihany koa fa manana vola sy laza be dia be izy ireo mba hifaninanana mifanatrika amin'iza na iza, tsara ny vokatra. Na izany na tsy izany, misy mpampiasa an-tapitrisany izay tsy nanova mpilalao ary manohy amin'ny mpilalao hafa, fa maro ny hafa noho ny fahafaha-manao na ny safidiny no niova ho an'i Apple sy Afa-po izy ireo amin'ny katalaogy, ny fiasan'ny App ary ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny malaza indrindra amin'ny Apple Music amin'ity taona 2017 ity dia any: Ed Sheeran, Luis Fonsi ary Joaquín Sabina
Mijanona amin'ny vidin'ny Apple Care + an'ny iMac ho an'ny iMac Pro